उपत्यकामा विद्युतीय सवारी गुडाउन एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीको अभियान - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
उपत्यकामा विद्युतीय सवारी गुडाउन एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीको अभियान
जेठ २४, २०७५ 8046 ऊर्जा खबर/काठमाडौं
बढ्दो वातावरण प्रदुषण कम गर्दै काठमाडौं उपत्यकालाई वातावरणमैत्री बनाउन एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीले अभियान सुरु गरेको छ । सरकारी तहबाट नभई कम्पनीले एकल प्रयासमा अभियान अघि बढाउन लागेको हो ।
जलविद्युत आयोजना तथा प्रसारण लाइन अध्ययन गर्ने उद्देश्यले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खोलेको कम्पनीले वातावरण सम्बन्धी अध्ययन तथा परामर्श पनि गर्दै आएको छ । अध्ययनकै क्रममा उपत्यकालाई डिजेल र पेट्रोलयुक्त सवारीबाट मुक्त पार्ने योजना अघि सारेको छ ।
कम्पनीले सरकारी, संस्थान तथा गैरसरकारी कार्यालयलाई विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्न सुझाव, परामर्श तथा सिफारिस गर्ने गरेको छ । केही वर्षभित्रै सवारी प्रदुषणले उपत्यकाको जनजीवन ज्यादै कष्टकर बन्ने देखिएकाले अभियान सुरु गरेको कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बताए ।
‘वातावरणमत्री सवारी नीति, २०१२ अनुसार रिङरोड वरिपरि १० ठाउँमा विद्युती सवारी चार्जिङ स्टेसन राख्ने उल्लेख छ,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘कम्पनीले सवारी उपयोग बढाउँदै चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा पनि सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।’
सिंहदरबारभित्रका सरकारी कार्यालय तथा निजी क्षेत्रलाई वातावरणमैत्री सवारी प्रयोग गर्न पनि कम्पनीले अपिल गरेको छ । केही समयअघि तत्कालीन योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले विद्युतीय सवारी खरिद गरेका थिए ।
सरकारको नीति निर्माण तहमा दबाब दिने उद्देश्यले कम्पनीको सिफारिस र सुझावकै आधारमा आयोगले करिब ५२ लाख रुपैयाँमा बिआइडी इ६ गाडी किनेको थियो । इन्जिनियरिङ कम्पनीले प्रयोग गरिरहेका ५ मध्ये ४ गाडी विद्युतीय छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, प्राधिकरण तथा केही सरकारी कार्यालयमा थोरै संख्यामा विद्युतीय सवारी प्रयोग हुन्छ । आगामी एक दशकसम्म सवारी प्रयोग हजारौं पुर्याउने कम्पनीको लक्ष्य छ ।
विद्युतीय सवारी प्रयोग सजिलो बनाउन वा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न ललितपुर तथा काठमाडौं उपत्यकाका मेयर चिरिबाबु महर्जन र विद्यासुन्दर शाक्य तथा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग छलफल भइरहेको प्रबन्ध निर्देशक शाक्यले बताए ।
यसैगरी, पुल्चोक साझा पेट्रोलपम्म नजिक चार्जिङ स्टेसन राख्नेबारे साझाका सञ्चालकसमेत रहेका कनकमणि दीक्षितसँग छलफल भइरहेको जनाइएको छ । विद्युतीय सवारी प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै सरकारले भन्सार, मूल्यअभिवृद्धि करमा सहुलियत दिनुपर्ने देखिन्छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले पनि देशका सबै क्षेत्रमा विद्युतको पहुँच पुर्याउन सरकारले अभियान सुरु गर्ने बताउँदै आएका छन् । १० हजार मेगावाट विद्युत स्वदेशमै खपत गर्न विद्युतीय सवारी प्रयोग ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुने मन्त्री पुनको धारणा छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा मात्र नभई देशका प्रमुख सहरमा यस्ता सवारीको प्रयोग बढाउन सके वातावरण प्रदुषण कम हुँदै जीवनयापन सुधार हुँदै जान्छ । साथै, सवारी प्रयोगले बढी हुने विद्युत खपतमा समेत उल्लेखनीय भूमिका खेल्न सक्छ ।
तत्कालीन आयोगका उपाध्यक्ष वाग्लेले सन् २०२८ सम्म उपत्यकाभरि विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्ने लक्ष्यअनुसार नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने बताएका छन् । यस्तै, नेपाली काँग्रेसका सांसद गगन थापाले समेत उपत्यकामा विद्युतीय सवारी प्रयोगको अभियान चलाउनुपर्ने सुझाएका छन् ।